Ny sarimihetsika romantika 60 tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra - News
Manjamaso Diy Fomba Fanamboarana Boky Fahalalana & Fanabeazana Lamaody Mpanambady Ny Adin-Tsaina Ao Amin'ny The News Fahasalamana Iraisam-Pirenena
65 amin'ny sarimihetsika romantika tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
Na mikasa ny hanaiky izany ianao na tsia dia samy tia zavatra tsara daholo sarimihetsika romantika . Hollywood dia nahay ny kanto amin'ny fikitihana ny fon'ny fontsika amin'ny alàlan'ny tantara an-tsary mendrika, avy any Teraka ny kintana iray ny The Notebook . Saingy mazava ho azy, ireo dia manasongadina ny lohatenin'ny tantaram-pitiavana tsy tambo isaina. Izahay dia nanangona ny sasany amin'ireo flicks tsara tarehy indrindra, manimba, mahaliana ary malefaka nandritra ny taona maro. Eto, sarimihetsika romantika 65 tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra izay hampihomehy anao, hitomany ary, eny, mino ny tena fitiavana.
Mifandraika: Ny komedi romantika 10 tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
Sarin'ny Fox Searchlight
Mpitsabo ara-batana iray, Leslie Wright (Queen Latifah), nametraka ny asany nofinofy miasa amin'ny mpilalao basikety matihanina, Scott McKnight (Common). Mivadika tantaram-pitiavana ny toe-javatra rehefa manomboka milatsaka amin'ny marary vaovao izy, izay tsy mahalala ny fihetsiny mihoapampana.
Jereo ao amin'ny Amazon Prime
Tamin'ny taona 1960 tany Hong Kong, ity horonantsary voatifitra tsara tarehy ity dia mitantara ny tantaran'ny mpifanila vodirindrina roa (nolalaovan'i Tony Leung sy Maggie Cheung) izay mpivady manao raharaha. Rehefa mifanatrika amin'ity famadihana ity izy ireo dia manomboka mandany fotoana bebe kokoa miaraka ary amin'ny farany dia mifankatia.
Manofa amin'ny Amazon Prime
3. 'Teraka ny kintana iray' (2018)
Rehefa nahita tsy nahy (ary raiki-pitia tamin'i Ally (Lady Gaga) mpanakanto malaza Jack (Bradley Cooper) ilay mpanao mozika malaza, Ally (Lady Gaga), dia nasongadiny ary nasongadiny ny asany. Saingy toy ny tantaram-pitiavana lehibe rehetra, dia eo akaiky eo ihany ny loza.
Zazavavy ihany koa aho, mijoro eo alohan'ny zazalahy iray, mangataka azy ho tia azy. Gah, tsy miraharaha akory ny maha-cheesy azy isika, ity volamena ity momba ny tompona fivarotam-boky anglisy manintona (Hugh Grant) sy ny mpilalao sarimihetsika amerikana malaza (Julia Roberts, milalao ny tenany) no tena rom-com volamena.
5. 'Fitiavana & Basketball' (2000)
Monica (Sanaa Lathan) sy Quincy (Omar Epps) dia mpinamana mandritra ny fahazazana miaraka amin'ny nofinofy mifaninana iray: ny ho lasa mpilalao basikety matihanina. Ny sarimihetsika dia manaraka ny diany an-taonany maro satria voatery nifidy ny fifandraisan'izy ireo sy ny asany vao manomboka.
6. 'Fitiavana marina' (2003)
Kintana maromaro (ao amin'i Hugh Grant sy i Colin Firth) no manandrana mamantatra ny fiainam-pitiavany amin'ny fihomehezana sy ny ranomaso be. Fanampin'izay, misy rakotra epic an'ny Mariah Carey's All I Want for Christmas. ' (Saingy azonao atao ny mijery an'ity mandritra ny taona manontolo.)
Mifandraika: Ny Quiz «Fitiavana tena sarotra» sarotra indrindra amin'ny Internet
7. 'Nitranga Indray alina' (1934)
Ity oldie fa goodie ity dia miorina eo amin'ny mpandova lova (Claudette Colbert) izay mandositra ny fianakaviany ary mihaona amina lehilahy manintona (Clark Gable) izay vonona hanampy azy. Ny snag? Ilay vahiny tsara fanahy dia tena mpitati-baovao mitady tantara. Ity no sarimihetsika voalohany nahazo ny mari-pahaizana dimy lehibe indrindra (Sary tsara indrindra, talen'ny, mpilalao sarimihetsika, mpilalao sarimihetsika ary sarimihetsika).
Manaraka tovolahy mainty hoditra io amin'ny fizarana telo samihafa amin'ny fiainany. Teny an-dalana dia manontany tena momba ny firaisana izy, mifanena amin'ireo namana vaovao ary mianatra ny tena dikan'ny fitiavana. Oh, ary efa nilaza ve isika fa nahazo ny loka Oscar ho an'ny sary tsara indrindra? (Miala tsiny, La La Land .)
Jereo amin'ny Netflix
Rehefa nifindra nankany afovoan-tanànan'i Paris i Amélie (Audrey Tautou) zazavavy kely sy somary kooky kely, ka lasa mpandroso sakafo, dia nahita harena very an'ny mponina taloha tao amin'ny trano fonenany izy ary nanapa-kevitra ny hanokana ny fiainany hanampiana ireo manodidina azy . Mihaona amina endri-tsoratra maro loko miaraka aminy izay mety ho lalao mety indrindra aminy. Mahafinaritra, mahafinaritra ary kilasika eo noho eo.
Ny tantara mahavaky fo dia manaraka an'i Molly Jensen (Demi Moore), mpanakanto iray izay miatrika ny famoizana ny vady malalany, Sam Wheat (Patrick Swayze), izay niverina teto an-tany ho fanahy tsy manam-pahefana. Tsy mbola niaina ianao mandra-pahitanao ilay sehatra niaraka tamin'i Moore, Swayze ary tanimanga mikorontana.
11. 'The Lovebirds' (2020)
Fotoana fohy talohan'ny nisarahany dia niditra an-tsehatra tamina tetika famonoana olona i Leilani (Issa Rae) sy Jibran (Kumail Nanjiani). Matahotra ny tsy ho voarafitra izy mivady, ka lasa nandeha nanadio ny anarany. Afaka mamonjy ny fifandraisan'izy ireo ve izy ireo mandritra ny toe-javatra tsy azo antoka?
12. 'Manamboninahitra iray ary lehilahy iray' (1982)
raha Vehivavy manja dia tena rom-com mahazatra, ity tantara an-tsehatra Richard Gere momba ny tovolahy nahavita fiofanana ho mpanamory fiaramanidina navy ity dia fijery matotra kokoa amin'ny fitomboana sy ny fitomboan'ny olombelona. Ataovy miambina ireo sela fa ho avy dia hisaotra anay ianao avy eo.
Warner Bros. Sary
13. ‘Casablanca’ (1942)
Ny hafa nanandrana, fa tsy misy mpivady sarimihetsika manana endrika mampiavaka an'i Ilsa sy Rick (Ingrid Bergman sy Humphrey Bogart) ao anatin'ity tantaram-pitiavana ity nandritra ny vanim-potoana romantika momba ny lelafo roa izay niampita ny làlana taorian'ny taona maro tsy nifandraisana. (Sarimihetsika mainty sy fotsy FTW.)
Mifandraika: Ny mpivady sarimihetsika malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra
Ny tanora mpahay siansa iray, Linda (Brie Larson), dia nalefa tany India tamin'ny asa nanendrena azy ireo hivarotra vary novaina araka ny fototarazo. Rehefa fantany fa hanimba asa izany dia miara-miasa amin'ny tantsaha iray antsoina hoe Rajit (Utkarsh Ambudkar) izy mba hanitsiana ny raharaha.
Jereo ao amin'ny Vudu
15. 'Tantara momba ny fitiavana' (1970)
Tsy azonay antoka fa afaka miditra an-tsambo miaraka amin'ity tsipika farany malaza malaza ity isika, ny fitiavana dia midika hoe tsy mila miteny mihitsy ianao hoe miala tsiny (tsy izany), fa ity kilasim-pinoana 70 taona ity dia mety indrindra amin'ireo alina izay tadiavinao tena tomany ratsy tarehy.
Mifandraika: Seho amin'ny fahitalavitra 10 hijerena rehefa mila tomany tsara ianao
16. 'Something New' (2006)
Kenya (Sanaa Lathan) dia triatra teo anelanelan'ny lehilahy roa samy hafa tanteraka. (Feo mahazatra?) Manomboka daholo izany rehefa mihemotra tsy amin'ny daty jamba izy taorian'ny nahalalany fa tsy Mainty ny mpanenjika azy. Avelany hisakana azy tsy hahita ny vady aman-drainy ve ny fitongilanana taloha?
17. 'Breakfast at Tiffany's' (1961)
Ireo perla ireo, ny Givenchy LBD ary ilay sary malaza 'do — ity kilasika ity dia mendrika hijerena ny fomba manaitaitra an'i Holly Golightly (Audrey Hepburn) irery. Saingy ity tantara mifototra amin'ny noveloma malaza an'i Truman Capote ity dia manana zavatra hafa mandeha ho azy - hatsikana, tantaram-pitiavana ary toerana be faritra Atsinanana Atsinanana.
Ny Orinasa Weinstein
Ny tantaram-pitiavana sasany dia natao hamboarina miaraka amin'ny S.O. ary manamafy ny fifankatiavanareo. Ny hafa, toa an'ity, dia jerena irery irery (na miaraka amin'ireo tsara indrindra aminao). Sary mangidy mamy momba ny fanambadiana sy ny alahelo naroson-dry Ryan Gosling sy i Michelle Williams.
19. 'Great seseorang' (2019)
Mety tsy hanana ny fiafarana mahafaly indrindra io, fa ity sarimihetsika ity kosa dia mitantara ny tantaran'ny tovovavy iray (Gina Rodriguez) narian'ilay sakaizany. Noho izany, niroso tamin'ny hoorah farany niaraka tamin'ireo sakaizany akaiky indrindra izy talohan'ny nifindrany tany San Francisco hanombohana vaovao.
Buena Vista Sary
Ity sarimihetsika sarimiaina Disney manaitra tanana ity dia mahazatra amin'ny sokajin-taona rehetra. Tsara mitovy? Ny famerenana ny taona 2017 starring Emma Watson as Belle and Dan Stevens as the Beast. Ny kinovan'ny hetsika mivantana dia manome ny angano maoderina, fanovana vehivavy tsy hitanay ho avy.
Jereo ao amin'ny Disney +
alika amin'ny tsy volo
21. 'The Big Sick' (2017)
Tsy izany no rom-com mahazatra anao. Fa kosa, ity sarimihetsika mahatsikaiky sy marani-tsaina ity (miorina amin'ny tantaram-pitiavana IRL an'i Kumail Nanjiani sy Emily Gordon) dia mandinika lohahevitra kolontsaina ary mahatsiaro mamelombelona. Ilay mpanao hatsikana teraka tany Pakistan, Nanjiani (nilalaovan'ny tenany) dia nilatsaka ho an'ny mpianatra Emily Gardner (Zoe Kazan), saingy rehefa tratran'ny aretina tsy fantatra izy izay mamela azy ho koma, dia tsy maintsy nifanehitra tamin'ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany ary ny tena fahatsapany i Kumail.
22. 'Focus' (2015)
Rehefa misy artista con veteran (Will Smith) maka novice (Margot Robbie) eo ambanin'ny elany, tsy ela akory dia lasa tantaram-pitiavana ny fisakaizan'izy ireo. Izany hoe mandra-pisarahany aminy ary lasa femme fatale mahomby. * Manampy amin'ny filaharana mivantana *
Jereo ao amin'ny YouTube
Amin'ny ilany andrefana ambony, andian-jiolahy roa - ny antsantsa sy ny jet - miady amin'ny fifehezana ny manodidina. Mihasarotra ny raharaha rehefa milatsaka ho an'i Maria (Natalie Wood), ny rahavavin'ny mpitarika Shark, ny mpikambana ao amin'ny Jets Tony (Richard Beymer). Romeo sy Juliet maoderina miaraka amina mozika.
volo tapaka nandritra ny vehivavy
24. 'Holiday Roman' (1953)
Mampiditra Audrey Hepburn Horonantsary voalohany momba ny andriambavy iray izay nitsoaka ireo mpiambina azy ary raiki-pitia tamin'ny mpanao gazety amerikana (Gregory Peck) tany Roma. Tena mahavariana, mahaliana ary tsy maintsy jerena sarimihetsika kilasika mpankafy.
25. 'The Photograph' (2020)
Rehefa maty tsy nampoizina ny renin'i Mae (Issa Rae) dia nametraka fanontaniana tsy tambo isaina izy. Rehefa avy nahita sary taloha an'ny reniny efa nodimandry izy dia sambany nisitrika ny tantaram-pianakaviany, izay niafara tamin'ny tantaram-pitiavana tsy nampoizina. Nanana anay tao Issa Rae ianao.
Sarin'ny Fox Searchlight / Miramax Films
26. 'Garden State' (2004)
Zach Braff dia nitarika sy nilalao an'ity sarimihetsika mahafinaritra sy saro-pady ity momba tovolahy iray sahiran-tsaina (Andrew) izay niverina tany amin'ny tanàna nahaterahany tany New Jersey noho ny fandevenana ny reniny taorian'ny nanalavirany ny fianakaviany. I Natalie Portman dia mpiara-miasa amin'ny maha-liana azy amin'ny fitiavana miaraka amina endri-tsoratra offbeat maro hafa ary feon-kira mpamono olona.
27. 'The Notebook' (2004)
O, andao. Tsy maintsy nampidirinay ity tantara mahazatra ity momba ny mpivady iray izay nikapoka ny toe-javatra mba hahitana ny lalan'izy ireo hiverina. Ilay seho niaraka tamin'i Noa (Ryan Gosling) nihiaka hoe Inona no tadiavinao? ao amin'ny Allie (Rachel McAdams) dia hikomy mandrakizay.
Avy amin'ilay lehilahy ao aoriany Fitiavana marina, Notting Hill SY Diarin'i Bridget Jones tonga ity fampisondrotana mampihetsi-po momba ny tovolahy iray izay mahatsapa fa manana fahaizana mandehandeha fotoana izy. Fampahatsiahivana mahafinaritra iray tokony hankamamiana isan'andro sy isan'andro (ary koa i Rachel McAdams dia mahatalanjona amin'ny zavatra rehetra).
StudioCanal / The Weinstein Company
Ity melodrama ity momba ny vehivavy roa izay mifankatia tamin'ny taona 50 dia noforonina tsara sy feno subtext sy atmosfera. Manomboka ny tantara rehefa hitan'i Therese Belivet (Rooney Mara) i Carol (Cate Blanchett) tao amin'ny magazay, ary ny ambiny dia tantara.
30. 'Sorompanavotana' (2007)
Tsy ho vitanao ny mamiravira ny masonao hiala amin'ny efijery mandritra fa sehatra tao amin'ny tranomboky niaraka tamin'i James McAvoy sy Keira Knightley (sy ny akanjo maitso manaitra). Fotoana fohy taorian'izay dia niova ny fiainany satria nosarahan'ny fianakaviana misabaka ireto mpitia roa ireto.
31. 'Sunshine mandrakizay an'ny saina tsy misy pentina' (2004)
Taorian'ny fisaraham-panambadiana mahatsiravina, ny mpivady iray (Jim Carrey sy Kate Winslet) dia namafa ny fahatsiarovana ny fifandraisan'izy ireo tamin'ity tantara an-tsary mampientanentana mampihetsi-po ity izay nahatratra ny teatra tamin'ny 2004. Azon'izy ireo atao ve ny miatrika ny famoizana olona tsy hitany fantatra ve fa nisy?
Tsy menatra izahay miaiky fa nahita izany tany amin'ny sinemarOAintelo. Ary na dia fantatsika aza ny fiafarany (manimba: milentika ny sambo), ny fontsika ihanymitohymitsambikimbikina amin'ny fifaliana isaky ny miara-mandihy i Jack sy i Rose ary manao saripika sary miboridana.
33. 'Antsoy aho amin'ny anaranao' (2017)
Ity tantaram-pitiavana mamelana eo amin'ny tovolahy fito ambin'ny folo taona sy ny mpanampy mpikaroka ny rainy ity dia natao tany Italia-1980 tonga lafatra. Tantaran'ny fitiavana voalohany mifototra amin'ilay tantara nosoratan'i André Aciman ankafizin'i Timothée Chalamet sy Armie Hammer tsy mampino. Mila miteny bebe kokoa ve isika?
Miorina amin'ny tantara nosoratan'i Kevin Kwan tamin'ny taona 2013 izay manana anarana mitovy amin'izany, ity hatsikana romantika ity no horonantsary Hollywood voalohany lehibe manana mpilalao sy ekipa aziatika maro an'isa hatramin'ny The Joy Luck Club tamin'ny taona 1993 (NBD). Manaraka ity teratany New York Rachel Chu (Constance Wu) ity izy miaraka amin'ny sipany Nick Young (Henry Golding) amin'ny fampakaram-bady malalany any Singapore. Rehefa tonga izy dia fantany fa tsy manan-karena be i Nick fa izy koa dia iray amin'ireo bakalorea mendrika indrindra ao amin'ny firenena. Ahoana no fomba hitetezan'i Rachel an'ity tontolo vaovao manankarena sy manintona ity ... sy ny reniny tsy mankasitraka?
35. ‘Manga no loko mafana indrindra’ (2013)
Rehefa mihaona amin'i Emma (Léa Seydoux) manana volo manga i Adèle (Adèle Exarchopoulos), dia niteraka zavatra tao anatiny izany. Ireo mpijery amin'ny sokajin-taona rehetra dia ho taitra amin'ity tantaram-pitiavana frantsay sarotra sy be fitiavana ity izay mivoatra mandritra ny folo taona. (Fialana andraikitra: telo ora ny halavany, koa aza hadino ny manovo fotoana ampy amin'ny fandaharam-potoananao.)
Nahazoana lalana avy amin'i Netflix
36. ‘Ho an'ny zazalahy rehetra tiako taloha '(2018)
Lara Jean (Lana Condor) dia nitazona ny tenany - hany ka nanana taratasy fitehirizana am-pitiavana tao anaty lalimoany izy, izay niaikenany ny fihetseham-pony tamin'ny tsirairay tamin'izy ireo. Rehefa nandefa taratasy tsy nahy ireo taratasiny ny zandriny vavy (Anna Cathcart) dia nanjary ny hafaliana.
37. 'Bridget Jones's Diary' (2001)
Tianay ny miteny ratsy, mampideradera sy mihomehy mafy Bridget Jones (Renée Zellweger) tahaka azy ao amin'ity hatsikana tsy hay tohaina izay niteraka tohiny roa. Raha misy zavatra iray mbola hiadian-kevitra: ekipa Darcy ve ianao na ekipa Cleaver? (Fanontaniana mamitaka: Darcy, mazava ho azy.)
Jereo ao Hulu
38. ‘If Beale Street Could Talk’ (2018)
Mpinamana hatramin'ny fahazazany i Tish sy Alonzo (Fonny) saingy nivadika ny fikasan'izy ireo amin'ny ho avy rehefa voasambotra noho ny heloka tsy nataony i Fonny. Niorina tamin'ny taona 1970 Harlem, ity sintom-pihetsiketsehana mihetsiketsika ity dia mifamatotra manodidina ny fatorana tsy azo vaky ny mpivady sy ny sakana tsy maintsy resin'izy ireo hiaraka. Voatifitra tsara dia ho gaga ianao (ary hitomany) amin'ity tantaram-pitiavana mampihetsi-po ity.
Eo ambanin'ny sarinao
39. ‘Dirty Dancing’ (1987)
Rehefa nandany ny fahavaratra tany amin'ny toeram-pialan-tsasatra Catskills niaraka tamin'ny fianakaviany i Frances 'Baby' Houseman (Jennifer Gray) dia raiki-pitia tamin'ilay mpampianatra dihy zazalahy ratsy toetra tao amin'ny toby izy, Johnny Castle (Patrick Swayze). Tantara mahazatra tsy misy fahagagana firy saingy hojerentsika hatrany hatrany izany izany fiakarana izany.
40. ‘Ny lesoka eo amin'ny kintantsika’ (2014)
Raha tsy afaka nitsahatra nitomany ianao nandritra Dia an-tongotra tadidy , ity no sarimihetsika ho anao. Mampahafantatra ny mpijery marary mararin'ny homamiadana roa manaparitaka tantaram-pitiavana tsy misy antenaina: Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) sy Gus Waters (Ansel Elgort). Ity no tantaran'izy ireo mahavaky fo.
41. ‘Andro iray’ (2011)
Azo antoka fa tsy ity horonantsary namboarina avy amin'ny tantaran'i David Nicholls voadona ity tonga lafatra (Ny lantom-peon'i Anne Hathaway, indrindra, nahazo flack betsaka) saingy tsy azo atao ny tsy mifankatia amin'i Dex sy i Emma raha mijery ireo mpivady roa mihaona amin'ny andro mitovy mandritra ny 18 taona isika.
Sarin'i Motion Walt Disney Studios
42. ‘The Proposal’ (2009)
Margaret Tate (Sandra Bullock) dia tonian-dahatsoratry ny orinasa mpamokatra boky, ary Andrew Paxton (Ryan Reynolds) no mpanampy azy miasa mafy. Rehefa niatrika sesitany tany Canada i Margaret, dia namolavola drafitra hanambadiana an'i Andrew izy mba hitazomana ny maha-visa azy, ary ho takalony dia manolotra fisondrotana i Andrew. Heverinay fa afaka maminavina ny zavatra manaraka ianao (hafaliana sy fitiavana, mazava ho azy).
43. ‘Brokeback Mountain’ (2005)
Ity tantara mampihetsi-po amin'ny fitiavana miafina eo amin'ny samy cowboy roa ity dia mahery, mahavaky fo ary voaforona tsara tarehy. Mifantoka amin'ny mpiompy iray antsoina hoe Joe Aguirre (Randy Quaid) ny tantara, izay manakarama an'i Jack Twist (Jake Gyllenhaal) sy Ennis Del Mar (Heath Ledger) hiasa amin'ny tanimboliny.
44. ‘When Harry Met Sally’ (1989)
Meg Ryan, Nora Efron ary ny Big Apple — lalao natao tany an-danitra rom-com. Horonantsary mahafinaritra momba ny mpivady New Yorkers tsy misy dikany (tafiditra ao amin'i Billy Crystal) izay resy lahatra fa tsy afaka ny ho mpinamana ny lehilahy sy ny vehivavy-sa azony atao?
Ny hany tokony ho fantatrao dia ny kintana Barbra Streisand amin'ity mifanohitra ity dia manintona tantaram-pitiavana izay niseho nandritra ny taona maro. OK tsara, i Robert Redford koa dia kintana amin'ny sarimihetsika, ary tsy azo lavina fa mahafinaritra. Tapitra.
46. ​​‘Alohan'ny filentehan'ny masoandro / Alohan'ny filentehan'ny masoandro / Alohan'ny mamatonalina '(1995/2004/2013)
Ao amin'ny sarimihetsika voalohany, ny lehilahy amerikana Jesse (Ethan Hawke) sy ny vehivavy frantsay Céline (Julie Delpy) dia nivory tamin'ny fiaran-dalamby, nidina tany Wina ary nandehandeha nitety ny tanàna, niresaka sy nifankatia. Ny tohiny dia narahina niaraka tamin'izy mirahalahy sivy taona taty aoriana tany Paris, ary ny fahatelo sivy taona taty aoriana tany Gresy. Te-hanokana faran'ny herinandro iray manontolo ianao ary hijery azy rehetra. Matokia anay.
47. ‘The English Patient’ (1996)
Ity fampifanarahana ny tantaran'i Michael Ondaatje dia kintana Ralph Fiennes sy Kristin Scott Thomas ho mpifankatia roa tonta any Afrika Avaratra nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Nahazo fanendrena 12 tamin'ny mari-pankasitrahana Academy faha-69 tamin'ny 1997 izy ary nahazo loka sivy anisan'izany ny Best Picture. Raha tsy manjavozavo amin'ny farany ianao dia biby goavambe. Vazivazy ihany. (Sort of.)
48. 'Ny fampakaram-badin'ny namako akaiky' (1997)
Julia Roberts no tena manintona azy amin'ity tantaram-pitiavana ity fa ny fihodinam-bolon'ilay sary no mahamety ny fijerena azy. Oh, ary ahoana no ahafahantsika manadino ny ah-mazing seho-mihira an'i Aretha Franklin's I Say a Little vavaka.
49. ‘Like Crazy’ (2011)
Tsy hadinonao mihitsy ny fitiavanao voalohany, fa indrisy ho an'ny mpianatry ny oniversite anglisy (Felicity Jones) sy ny mpiara-mianatra aminy amerikana (Anton Yelchin), nihetsika nampalahelo ny tantaram-pitiavan'izy ireo rehefa nandika ny fe-potoan'ny visa izy ary voatery nisaraka izy ireo. Raha mahatsapa tena-amin'ny-fiainana ilay sarimihetsika dia azo inoana fa noho ny fanatsarana ny ankamaroany.
50. 'Very amin'ny fandikana'
Olona tsy fantatra roa (Scarlett Johansson sy Bill Murray) no namorona fatorana tsy azo inoana aorian'ny fihaonana tao amin'ny hotely fisotroana iray tao Tokyo. Amin'ny ankapobeny, sarimihetsika mampihetsi-po (ary indraindray, mampihomehy mafy) momba ny fitadiavana fifandraisana amin'ny olona iray rehefa tsy andrasanao izany.
Kate (Emilia Clarke) reraky ny asany miasa amin'ny elf mandavantaona amina fijanonana fialantsasatra. Rehefa nifanena tsy nampoizina tamin'ny lehilahy iray antsoina hoe Tom (Henry Golding) izy dia hitany tampoka ny tena dikan'ny Krismasy. Alexa, milalao ny 'Christmas Noely' tao Spotify.
52.'Zavatra 10 Halako aminao'(1999)
Kat Stratford (Julia Stiles) sy ny zandriny vavy, Bianca (Larisa Oleynik), dia tsy afaka niavaka tamin'ny tsirairay. Noho izany, ny dadany (Larry Miller) dia namorona fitsipiky ny ankohonana izay milaza fa tsy afaka mampiaraka i Bianca raha tsy efa manana sakaiza i Kat. Mazava ho azy fa mihemotra ny drafitra.
53.'Fitiavana, azo antoka'(2020)
Nick (Damon Wayans Jr.) dia tamin'ny daty voalohany 1.000, ary mbola mpitovo izy. Noho izany, manakarama mpisolovava izy hitory ny fampiharana mampiaraka, izay heverina fa manana taham-pahombiazana avo. Araka ny efa voalaza mialoha dia hahita fitiavana i Nick rehefa tsy andrasany firy. (Ary eny, kintana koa i Rachael Leigh Cook.)
Na eo aza ny fivoarany miadana, Forrest Gump (Tom Hanks) dia tovolahy tsara fanahy sy be fanantenana, noho ny reniny mpanohana (Sally Field). Azo antoka, mampalahelo toy ny helo izany. Fa amin'ny lafiny tsara, azonao atao ny manamaivana tanteraka ny fanaintainana amin'ny sôkôlà boaty.
an-trano fanafody mba hampitsahatra volo latsaka avy hatrany
Zazavavy iray vao manambady (Lily James) mitsidika ny fananan'ny vadiny, izay hita eo amin'ny morontsirak'i Angletera. Ny olana? Toa tsy hadinony ny momba ny vadin'ny vadiny taloha, Rebecca, izay ny lovany dia nosoratana tamina rindrin'ny trano fonenana.
Simon dia mpianatra 17 taona any amin'ny lisea izay mbola tsy nilaza tamin'iza tamin'iza — ao anatin'izany ny fianakaviana sy ny namana - fa pelaka izy. Eny, efa hiova izany rehetra izany. (Rehefa avy nijery ianao Fitiavana, Simon , aza hadino ny mijery ny andian-tsarimihetsika tohin'i Hulu, Fitiavana, Victor .)
Alfonso Bresciani / Sarimihetsika CBS
Stella (Haley Lu Richardson) sy Will (Cole Sprouse) dia samy marary cystic fibrosis. Noho ny aretina dia tsy mahazo mifampikasoka izy ireo ary tsy maintsy mitazona lavitra enina metatra. Koa satria tapa-kevitra ny hiaina amin'ny fitsipiny manokana i Stella, dia novainy ho dimy metatra ny baikon'ny dokotera (avy eo ny lohatenin'ny sarimihetsika). Toa mahazatra loatra amin'ny taonan'ny areti-mifindra coronavirus.
58.'Izaho eo alohanao'(2016)
Ao anatin'ny fiezahana hivelomana dia manova asa tsy tapaka i Louisa Lou Clark (Emilia Clarke). Ny tanjony vaovao dia ny fahatongavana ho mpikarakara an'i Will Traynor (Sam Claflin), banky manankarena sy malemy izay mila fatratra ny fomba fijery vaovao amin'ny fiainana.
59.'Kintana koa ny masoandro'(2019)
Daniel (Charles Melton) sy Natasha (Yara Shahidi) dia avy amin'ny tontolo roa samy hafa. Raha te hahatratra bebe kokoa noho ny nomanin'ny ray aman-dreniny ho azy i Daniel, Natashia kosa matahotra sao ho voaroaka ny fianakaviany. Rehefa mifanena tampoka sy mifankatia izy ireo dia manidina. (Tsy lazaina intsony, mifototra amin'ny boky namesake nataon'i Nicola Yoon .)
60.'Fitiavana sy zava-mahadomelina hafa'(2010)
Jamie Randall (Jake Gyllenhaal) dia mpivarotra fivarotam-panafody tsara tarehy izay tsy mbola nanana olana naka vehivavy tamin'ny indostrian'ny vehivavy azy. Rehefa mihaona amin'ny marary marary Parkinson antsoina hoe Maggie (Anne Hathaway) izy ireo dia mamorona fifandraisana akaiky tsy hitany ho avy.
Mifandraika: Sarimihetsika mahatsikaiky 48 an'ny vehivavy rehefa mila fihomehezana tsara ianao
61. ‘Fitiavan'i Sylvie '
Manomboka amin'ny fitafiana mahavariana ‘50 taona sy ny naoty mozika ka hatramin'ny simia mahafinaritra an'i Tessa Thompson sy Nnamdi Asomugha dia tsy afaka ny ho raiki-pitia amin'ity sarimihetsika ity. Ny Fitiavan'i Sylvie manaraka ny fifandraisana misy eo amin'ny samy mpifankatia Sylvie Parker (Thompson) sy Robert Halloway (Nnamdi Asomugha), mpiangaly mozika jazz.
Raha toa ianao ka efa nandany ny fahatsiarovan-tenan'ny be mpividy indrindra an'i Obama Obama, dia efa azonao ny fomba nanombohan'ny tantaram-pitiavany tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Barack Obama. Amin'ity tantaram-pitiavana mahafinaritra ity, Parker Sawyers sy Tika Sumpter dia mampiseho ny mpivady malalany rehefa nivoaka tamin'ny daty voalohany tamin'ny 1989 izy ireo.
mijery an'i Hulu
63. ‘Loving’ (2016)
Ny tantara biolojika dia mitantara ny tantaram-piainan'i Richard sy Mildred Loving, ireo mpitory izay nanampy tamin'ny fanokafana ny lalana ho an'ireo mpivady mpiray tam-po tsy tambo isaina tamin'ny alàlan'ny raharaha fitsarana avo Loving miady amin'i Virginia tamin'ny 1967.
mijery ao amin'ny Netflix
64. ‘The Incredible Jessica James’ (2017)
Rehefa avy nandalo fisaraham-panambadiana nahatsiravina niaraka tamin'ny sakaizany taloha, i Jessica James (Jessica Williams) dia namorona fifandraisana vaovao amin'ilay olona tsy dia azo inoana loatra. Hihomehy ianao SY omeo anao ny fahatsapana rehetra.
65. 'Always' (2011)
Ity tantara an-tsehatra Koreana Tatsimo mampihetsi-po ity dia manaraka ny mpikarakara ny fiantsonan'ny fiara ary mpanao ady totohondry teo aloha izay nilatsaka tamin'ny tovovavy jamba. Amboary ny sela, satria feno fotoana mpirotsa-dranomaso.
mijery amin'ny Amazon
Mifandraika: ny komity romantika 60 tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
Sokajy Ahoana No Vaovao Momba Ny Lamaody Fitiavana Firaisana
toro-hevitra momba ny tarehy mamirapiratra ao an-trano
Chia ambioka mandritra ny fitondrana vohoka
Katie Holmes harato-danja
ny fomba hampijanonana ny volo hianjera sy hamerina hamerina voajanahary ao an-trano
fanaova soda hanala tan
fanomezam-pahasoavana tsara indrindra ho an'ny tanora